WALAAC: Arsenal Oo Karantiil La Geliyey, Haddii Ay Jiraan Ciyaartooyo Laga Helay Coronavirus Iyo Kulankii Ay La Ciyaari Lahaayeen Man City Oo La Baajiyey – Cadalol.net
Ciyaartoyga kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhamaantood karantiil la geliyey, waxaana laga hor joogsaday inay wax kulamo ah dheelaan in muddo ah illaa inta laga ogaanayo in ay bad-qab ka yihiin cudurka Coronavirus oo looga shakisan yahay inuu usoo gudbiyey mulkiilaha naadiga Olympiacos ee Evangelos Marinakis oo toddobaad ka hor kula kulmay garoonka Etihad, hase yeeshee shalay la shaaciyey inuu xanuunkan qabto.
Arsenal ayaa Olympiacos la ciyaartay kulan ka tirsanaa Europa League oo lagaga adkaaday 2-1, laguna reebay, hase yeeshee waxa soo baxday in Evangelos oo u dhashay Giriiggu uu qabay xanuunkan, inkasta oo aan la ogeyn haddii uu kulankii uu Emirates joogay hayey.
Kulankii Manchester City iyo Arsenal ee caawa ayaa loo baajiyey cabsida soo waajahday Arsenal, laakiin waxa kale oo la filayaa in ciyaaraha toddobaadka soo aaddan ee Gunners la baajiyo.
Dhawr ka tirsan ciyaartoyga Arsenal ayaa si gaar ah meel loogu karantiilay iyadoo laga shakisan yahay, laakiin lama sheegin haddii laga helay astaamaha iyo calaamadaha lagu garto xanuunkan.
War-saxaafadeed ay Arsenal soo saartay ayay ku sheegtay inay ogaatay in tiro ka mid ah ciyaartoygeedu ay la kulmeen Evangelos Marinakis markii uu yimid Emirates, February 27, si gaar ahna ay u karantiishay.
“Waxaanu aqoonsanay tiro ciyaartooyo Arsenal ah oo la kulmay mulkiilaha Olympiacos markii ay dhamaatay ciyaartaasi.” Ayay tidhi Arsenal.
Kooxdu waxa kale oo ay sheegtay in muddo 14 maalmood ah ay takoornaan doonaan ciyaaryahannadeedu oo ay raaci doonaan nidaamyada ay dawladdu u jidaysay karantiilka dadka laga helo xanuunka, waxase dhinaca kale jamaahiirta niyadda loogu qaboojiyey inay aad u hoosayso khatartu.
“Talooyinka caafimaad ee aanu helnay waxay muujinayaan inay halis ugu jiraan inuu ku dhaco Covid-19 oo khatar aad u hoosaysa ay ugu jiraan. Si kastaba, waxaanu si adag u raacaynaa tilmaamaha dawladda ee soo jeedinaya in qof kasta oo la kulma shaqsi uu helay fayrasku uu muddo 14 maalmood ah guriga ku karantiilaado laga bilaabo xilligii kulanka.” Ayay tidhi Arsenal, waxaanay sii raacisay in ciyaartoygeedu aanay dheeli doonin kulanka Manchester City ee caawa oo dib loogu dhigayo.
“Ciyaartoygu muddo 14 maalmood ah ayay guryahooda ku jirayaan. Afar shaqaalaha Arsenal ah oo ag-fadhiyey Mr Marinaki ayaa sidoo kale guryahooda kusoo dhamaysan doona 14 maalmood” ayay tidhi Arsenal.
Inyar kaddib qoraalka Arsenal, maamulka Premier League ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in la baajiyey ciyaarta Arsenal iyo Manchester City si badqabka ciyaaryahannada loo sugo.